Fekitori Kuratidzwa - Hebei Delin Machinery Co., Ltd.
Iko kunaka kwezvigadzirwa zvedu kuri nani pane mamwe makambani ari muindasitiri imwechete. Kuyedza kutanga kubva mukukanda kunoitwa nevanoziva & vane hunyanzvi vanoshanda uye vaongorori vanoona yepamusoro mhando yezvinhu zvese kumushini wese.
Tine akateedzana emidziyo yekugadzira inosanganisira planomiller, vertical lathe, muchina wekuchera, chinosanganisika chinosanganisika, jecha kugadzirira muchina, kusungunuka kwevira, kupisa kwemafuta
yekuyedza michina yezvinhu: iyo metallographic chimiro, kugadziriswa kwezvipenga zvikamu, machining, kuungana, uye chigadzirwa mashandiro zvinogona kuitwa nekuongorora chishandiso chemidziyo kuongorora uye kuyedza, sekuvhunduka muyedza kugadzikana, wepasirese simba tester, peel simba tester, uye kuyera zviridzwa uye maturusi ekuongorora ekushandisa chaiko uye kushandiswa kwepasirese. Kunze kwaizvozvo, takavaka nyanzvi yekuyedza chikuva chekuyedza zvigadzirwa semapombi.
Performance kuyedza zvigadzirwa
Delin ndiye muridzi wedhorobha guru rekuyera mvura kune slurry plump muNorth China. Kuita kwechigadzirwa kunozoedzwa usati wasvitswa, kuve nechokwadi chekuvimbika uye mhando yezvigadzirwa zvedu.